6th October, 2021 Wed १०:१०:५७ मा प्रकाशित
कानून मिच्न दिदैनौं । तर, के हो भने कुनै ठाउँमा, कानूनमा विवाद भयो भने त्यो विवाद निरुपण गर्ने संस्थाले न्यायपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ ।
सत्ता गठबन्धन बर्खामा बनेको हो । बर्खा सकिएपछि गठबन्धन पनि सकिन्छ । मैले त पहिले नै बोलेकै हुँ । यस विषयमा थप बोल्नुभन्दा पनि हेर्दै जाउँ । एमालेविरुद्ध षड्यन्त्र के हो ? कहाँ-कहाँ छ भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दै आएको छ । दलीय भागबण्डामा प्रधानन्याधीशसमेत मुछिएपछि यो सरकार परमादेशबाट बनेको भन्ने हामीले लगाएको आरोप पुष्टि भएको छ । परमादेशबाट बनेको सरकार कति दिन चल्छ र ?
सत्ता गठबन्धन रहेसम्म एमालेसँग कुनै सहकार्य हुँदैन । एमालेसँग सहकार्यको निम्ति गठबन्धन टुट्नु बाहेक कुनै विकल्प छैन । गठबन्धन पनि रहने अनि एमालेसँग पनि सहकार्य हुने भन्ने हुँदैन । अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुटेको अवस्थामा एमालेको सहयोग रहन्छ । उनीहरूले एमाले सिध्यायौं भन्ठानेका थिए, हामीले केही नगरी अहिलेको सत्ता गठबन्धन सकिन्छ । जसरी माकुराको आमाले बच्चाको मुख हेर्न पाउँदैन, त्यसैगरी यो गठबन्धनले अरु मुख हेर्दैन । हेर्न सक्दैन ।
अहिलेको राजनीतिको निकासको विकल्प भनेको पहिले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले ‘ग्वाँ’ भन्नुपर्छ । यसको अर्थ हामीले सत्ता चलाउन सकेनौं । राजनीतिक निकास दिन सकेनौं भनेर आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ । हामी अहिले किन आत्तिने ? हामीले प्रष्ट भन्दै आएका छौं, एमाले सरकारमा रहँदा जनताको सेवा गर्छ । सरकार बाहिर रहँदा पनि हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएर अगाडि जान्छौं । हामी संविधान मिच्न दिदैनौं ।
कानून मिच्न दिदैनौं । तर, के हो भने कुनै ठाउँमा, कानूनमा विवाद भयो भने त्यो विवाद निरुपण गर्ने संस्थाले न्यायपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले फैसला सही गर्यो कि गलत गर्यो त्यो बुझाइमा फरक हुन सक्छ । सकेसम्म सर्वोच्चले सर्वमान्य हुने गरी न्याय गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो अदालतले कानूनमा जेसुकै भएपनि बच्चाको मुख हेरेर फैसला गर्दिएको छु भन्छ । त्यस्तो त होइन नि । फैसला भनेको संविधान र कानून हेरेर गर्नुपर्छ, मुख हेरेर होइन । हो, अहिलेको राजनीतिक निकासको गाँठो यहिँ परेको छ । अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत भएकाले त्यसको व्याख्यालाई हामी मान्छौं तर आ-आफ्नो मत त फरक हुन्छ नि । हाम्रो मत फरक हो । र, संसारमै नभएको अभ्यास नेपालको अदालतले न्याय दिने सन्दर्भमा गर्न थाले । अझै भन्ने हो भने न्यायपालिकाले कार्यपालिकामा पनि आफ्नो लागानीको प्रतिफल खोज्न थाले । त्यो दुःखदायी कुरा हो ।
अहिले संवैधानिकरुपमा यदि देउवाले अब यो गठबन्धनले काम दिएन । राष्ट्रिय सहमतिमा जाउँ । गठबन्धन विघटन गरी नयाँ आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्न तयार छु भनेर सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो भने त्यहाँबाट निकास निस्कन्छ । नेकपा एमाले देश, जनता, संविधान र मुलुकलाई अग्रगमनलाई गति दिने सन्दर्भमा कहिल्यै पनि पछि पर्दैन । एउटा निकास त्यो हुन्छ । त्यहाँबाट नयाँ सरकार र नयाँ गठबन्धन निस्कन सक्छ ।
अर्को, यो पनि नहुने, त्यो पनि नहुने अवस्था आएमा अन्तिम विकल्प भनेको निर्वाचन नै हो । देशलाई अग्रगमनमा लैजानको निम्ति, राजनीतिको गलत मनसायबाट तयार गरिएको जालोलाई च्यातेर राजनीतिक निकाससहित संवैधानिक र कानूनी बाटोबाट अगाडि बढ्नु उत्तम विकल्प हो । यो सत्ता गठबन्धन कायमै रहेको अवस्थामा एमालेले यही नै गर्नुपर्छ भनेर हतारमा निर्णय गर्दैन ।
(पण्डित पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता हुन्)